Turkiga: oo sheegay inuu daryeel siinayo qaxootiga ka imaanaya Siiriya & Merkel oo ku wajahan Ankara - Wargane News
Home Somali News Turkiga: oo sheegay inuu daryeel siinayo qaxootiga ka imaanaya Siiriya &...
Dowlada Turkiga ayaa sheegtay inay daryeel siin doonaan kumanaanka kun ee Qaxootiga ah ee ka imaanaya magaalada Aleppo (Xalab) oo ay xiligan ka socdaan dagaalo culus.
Turkiga oo horey u xiray xaduuda uu la wadaago Siiriya ayaa sheegay inuu caawin doono qaxootiga ka yimid dalka Siiriya balse loo baahan yahay in la diiwaangeliyo inta aysan soo gelin guddaha Turkiga.
Xukuumada Ankara oo ka cabsi qabta kooxaha Xagjirka ah ee sida ISIS inay kusoo dhex dhuuntaan Qaxootiga ayaa dhanka kale sheegtay in Xil weyn uu ka saaran yahay u gargaarida qaxootiga u badan haweenka iyo caruurta ee xiligan dhooban xaduuda Siiriya.
Dhinaca kale waxaa lagu wadaa inay dalka Turkiga gaarto haweenayda hogaamisa dalka Germany Angela Merkel oo dowlada Turkiga kala hadli doonta arrinta Qaxootiga badan iyo sidii looga hortagi lahaa in dadkaasi ay u soo tahriibaan dhanka Yurub.
Wadanka Germany ayaa sanadkii tagay ay gaareen qaxooti ka badan 1 milyan oo intooda badan ka yimid Siiriya, waxayna xukuumada Berlin ka cabsi qabtaa in mawjado kale oo qaxooti reer Siiriya ah ay soo galaan wadankooda oo weli la tacaalaya qaxootigii hore halkaa u joogay.
Angela Merkel ayaa dhigeeda France Hollande Axadii shalay shir gaar ah kula qaadatay magaalada Strasbourg ee dalka France, kulankaasi oo looga hadlay arrimaha Qaxootiga.
Dalalka Midowga Yurub ayaa horey u balan qaaday inay Turkiga ku taageeri doonaan dhaqaale hadii uu adkeeyo xaduudiisa, isla markaana ay ka caawin doonaan kharashaadka uga baxa xeryaha qaxootiga, balse Turkiga ayaa sheegay in deeqda EU-da oo gaareysa 4 bilyan aysan ku filneyn qaxootiga ay hayaan oo ka badan 2.5 milyan oo qof.